मार्मिक स्‍मृति ! फुलपातीसँग जोडिएको बुवाको याद…. « Post Khabar
मार्मिक स्‍मृति ! फुलपातीसँग जोडिएको बुवाको याद….
Published on: 23 October, 2020 7:22 am
दशैंको माहोलमा आफन्तजन र बाल्यकालको रमाईलो याद नआउने कसलाई होला र? दशैंको टीका त महत्वपुर्ण भईहाल्यो, हरेक वर्ष फुलपातीको दिनमा पनि मुख्य रुपमा बुवाको याद आउने गर्छ।
हामी हुर्किएको धनकुटा जिल्लामा फुलपातीको विशेष समारोह हुने गर्थ्यो। हामी चारैजना छोरीहरुलाई बुवाले फुलपाती समारोह अवलोकन गराउन टुँडिखेल लैजानुहुन्थ्यो। घर घरमा फुलपाती भित्रयाउँदै दशैंको स्वागत गर्ने परम्परालाई हर्ष बडाईंका साथ मनाउन नेपाली शेनाहरुले बाजागाजा सहितको सुन्दर परेड गरेको, तोप पड्काएको, मेला लागेको हेर्न खुब रमाईलो लाग्थ्यो हामीलाई। हाम्रा बुवा आजीवन शाकाहारी। दशैंको मिठो खाजाको रुपमा दही च्युरा केरा खाने चलन थियो। फुलपाती अघि नै डोरी टाँघेर केराको जोहो गरिसक्नुभाको हुन्थ्यो।
हामीलाई भन्दा बढी बुवालाई आफ्नो बाल्यकालमा फुलपाती हेर्न अझ रमांईलो लाग्थ्यो रे। बुवाले सानैद्खि हजुरआमालाई घरायसी काममा धेरै सहयोग गर्नुहुन्थ्यो रे। आफ्नो विद्यार्थी जीवनमा प्राय कुनै वर्ष पनि फुलपाती समारोह छुटाउनुभाको थिएन रे। एक वर्ष हजुरआमालाई घरमा काम सघाउँदा सघाउँदै अलिक ढिला भएछ। त्यही पनि हतार हतार दौडिनुभएछ। हाम्रो घर जंगलपारी थियो र घरबाट टुँडिखेल पुग्न छिटो छिटो हिंड्दा पनि आधा घन्टाभन्दा अलि बढी लाग्थ्यो। बुवा घरबाट जंगल पुग्दा नपुग्दै तोप पड्किएको सुन्नुभो रे। त्यो वर्ष फुलपातीको रमाईलो हेर्न पाईन भनेर जंगलको बीचमा बसेर रुनुभाको थियो रे। बुवाका यस्ता बाल्यकालका कहानी सुन्न हामीलाई कति रमाईलो लाग्थ्यो। हामीले भन्दा कैयौं गुणा बढी संघर्ष गरेता पनि बुवाको बाल्यकाल हाम्रो भन्दा धेरै रमाईलो र रोचक रहेछ भन्ने लाग्थ्यो वहाँका विभिन्न कथाहरु सुन्दा।
जति लेखेर पनि नसकिने, हृदय रमाऊने यादहरु छन् बुवा आमा दुबैसँग जोडिएका। ती यादहरुलाई मनमा गुम्स्याएर राख्नुभन्दा लेखेर सबैबीच बाँड्न पाउँदा मुटुको गाँठो खुकुलो हुने गर्छ। जीवन मरणशील छ। हामी चारैजना छोरीहरुले हाम्रा उज्याला, हँसिला, दयालु, प्रेमका प्रतिमुर्ति मातापिता यति चाँडो ईतिहास बन्नुहोला भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनौं। बास्तवमै कतिबेला, कहिले यो संसार छोडेर जानुपर्ने हो, कसलाई थाहा छ र? हाम्रा बुवा आमाले जस्तै हामीले पनि हाम्रो दोस्रो पुस्तालाई स्मरण योग्य केही सुनौला यादहरु छोड्न सकुँ। अतीतको शोक र भविश्यको चिन्ता भुलेर वर्तमानमा रम्न सकुँ।
आजको दिन हजुरसँग फुलपाती हेर्न गएको मिठो यादको साथमा हजुरका ती रमाईला कथा छोरीहरुलाई सुनाएर बिताउनेछु बुवा। हजुर र आमाको हामी प्रतिको निशर्त र निश्वार्थ प्रेम तथा आशीरवाद नै हाम्रो बाँकी जीवन जिउने प्रेरणा र आधार हुन्। हजुरहरु दुबैमा हार्दिक प्रेम र श्रद्धा अर्पण गर्दछौं।